Shaashadda Apple Watch Series 7 waxay yeelan doontaa 16% pixels ka badan kan hadda jira | Waxaan ka imid mac
Shaashadda Apple Watch Series 7 waxay yeelan doontaa 16% pixels ka badan kan hadda jira
Taariikhda siideynta kan cusub Apple Watch sanadkaan, taxanaha 7, iyo in kasta oo Apple isku dayayso inay qariso warkeeda si aysan u soo bixin ka hor inta aan lagu soo bandhigin qodobka xiga ee bisha Sebtember, lama huraan waxay sii kordheysaa kharash badan si loo xakameeyo daadinta astaamaha cusub.
Oo midkood baa inoo sharxaya Bloomberg. Waxay ka hadlaysaa cabbirka shaashadda cusub, dhinacyada cusub, iyo kororka tirada pixels shaashadda. Bal aan aragno waxay noo sheegaan.
Bloomberg ayaa hadda daabacday mid cusub warbixinta halkaas oo uu si qoto dheer u faahfaahinayo qaar ka mid ah astaamaha cusub ee silsiladda 7 ee Apple Watch oo lagu soo bandhigi doono qodobka xiga ee Apple bisha Sebtember.
1 Laba cabbir: 41 iyo 45 mm.
2 Saddex wicitaano cusub oo gaar ah
Laba cabbir: 41 iyo 45 mm.
Waxa ugu horreeya ee laga xuso warbixintan waa cabbirrada shaashadda cusub. Kan ugu yar ayaa noqon doona 41 mm. iyo kan ugu weyn 45 mm. Inaad noqoto afargeesle, cabbiraduhu waxay tixraacayaan dhinaca toosan ee sanduuqa.
Bandhigga cusub ee Apple Watch wuxuu cabbirayaa qiyaastii 1,9 inji oo ah nooca 45mm, marka la barbar dhigo 1,78 inji oo ah nooca 44mm ee hadda jira. Qaabka 45mm wuxuu u muuqdaa inuu leeyahay qaraar ah 396 × 484 pixels, marka la barbar dhigo qaraarka pixel ee 368 × 448 ee Taxanaha 6. Guud ahaan koror 16% ah tirada pixels ka badan 6 taxane.
Kani waa koror ballaadhan oo la yaab leh oo la taaban karo. Grey waa 44mm madowna waa Taxanaha 7. Kiiska saacaddu waa hubaal inuu ka weyn yahay curcurka. https://t.co/d6pfrdqve9 pic.twitter.com/XCa5NKP1Mo
- Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 2, 2021
Saddex wicitaano cusub oo gaar ah
Waxa kale oo ay sharxaan in taxanaha cusub ee sannadkan soo bixi doono saddex qaybood oo cusub gaar ah: "Modular Max", "Continuum" iyo garaac waqti cusub oo adduunka ah.
«Qaybsan Max»Waxaad yeelan doontaa saacad dhijitaal ah oo ay weheliso dhib yar oo leh dhibaatooyin waaweyn oo ku dherersan dhererka shaashadda oo is dul saaran. Waa cusboonaysiinta Modular Infograph Modular, oo aan ku arki karno kaliya hal dhib oo weyn.
«sii socodka»Isbeddeli doonaa iyadoo la raacayo socodka waqtiga iyo waqtiga hadda. Iyo waji cusub oo daawasho ah waqtiga aduunka, oo loo yaqaan Atlas iyo World Timer, ayaa u oggolaan doonta adeegsadaha inuu isla eego dhammaan aagga waqtiga 24. Wicitaanka dibedda wuxuu muujinayaa aagagga waqtiga, halka garaaca gudaha uu muujinayo waqtiga goob kasta. Isticmaalayaasha waxay awoodi doonaan inay doortaan inay ku arkaan waqtiga digital ama analog. Wejiga saacaddan wuxuu la mid yahay kuwa ay caan ku yihiin Patek Philippe, Breitling, iyo Vacheron Constantin.
Ka sokow saddexdaan weji ee cusub, Bloomberg wuxuu kaloo sheegayaa in Apple ay u sameyneyso wejiyo cusub noocyada Hermes y Nike ee Apple Watch. Shirkaddu waxay tijaabineysaa weji cusub oo Hermes ah oo leh “tirooyin isbeddelaya saacadba saacad” iyo weji Nike cusub oo leh lambarro u dhaqaaqa sida dhaqdhaqaaqaagu yahay. Waan arki doonaa haddii ay haystaan ​​waqtigii loogu talagalay soo -saarista taxanaha cusub ee Apple Watch 7.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Shaashadda Apple Watch Series 7 waxay yeelan doontaa 16% pixels ka badan kan hadda jira
Tan iyo usbuucii ugu dambeeyay ee Ogosto oo aan wax war ah loo hayn 14 iyo 16 "MacBook Pro
Kuwani waa qaar ka mid ah hadiyadaha ay Apple siiso shaqaalaheeda